शिवजीको दर्शन र ज्ञानको खोजी | चितवन पोष्ट दैनिक
शिवजीको दर्शन र ज्ञानको खोजी
२०७० फाल्गुन १५, बिहीबार ०४:४२ गते
…महाशिवरात्रिका दिन शिवभक्त बाबासँग भेट भएको थियो । बाबाको आश्रममा पुगेपछि उनले भने– ‘अज्ञानी बालक आऊ, तिमीलाई आज म शिवजीसँग साक्षात्कार गराइदिन्छु । तिमीले केही ज्ञान हासिल गर्नेछौँ ।’
बाबाको यस्तो आज्ञा सुनेर मनमा नयाँ उत्सुकता जागेर आयो । बाबाको आश्रमनजिकै ठूला–ठूला मुढा बालेर शिव धुनी बालिएको थियो । देवताका पनि देवता आराध्यदेव शिवजीसँग साक्षात्कार हुने चाहनाले धैर्यपूर्वक बाबाको अगाडि बसिरहेँ । बाबाका चम्किला आँखामा आँखा जुधाउन नसके पनि उनको धाराप्रवाह प्रवचन सुनेर म आल्हादित बनिरहेको थिएँ ।
सुरूमा बाबाले शिवजीको अद्भुत शक्तिका बारेमा चर्चा गरे । शिवजीका सयौँँ अवतार र चरित्रबारे रहस्यहरु खुल्दै गए । शिवजीले यो पृथ्वी अर्थात् मत्स्यलोकका लागि पहिले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको रचना गरे । ब्रह्मालाई सृष्टि गर्न, विष्णुलाई पालन गर्न र महेश्वरलाई संहार गर्न लगाए । गीतामा जे लेखिए पनि, रामायणमा जे रचिए पनि, श्रीस्वस्थानीमा जस्तो वर्णन गरे पनि पिताका पनि पिता र नाथका पनि नाथ उनै दयालु शिवजी हुन् भन्नेमा शंका रहेन ।
देवता, मानव र असुरहरुको रचना गर्ने शिवजीसँग साक्षात्कार हुने अवसर पाउनु मेरा लागि कम हर्षको विषय थिएन । शिवजीसँग साक्षात्कार हुन थालेपछि काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार त्यागेर बाबा योगी भएका थिए । मजस्ता भोगीहरुका लागि यस्ता साक्षात् शिवभक्त बाबासँग सानिध्य हुन पाउनु नै सौभाग्यको कुरा थियो ।
भौतिक चीजसँग कत्ति पनि आकर्षण नभएका बाबाको दर्शन पाउनु यो आधुनिक जोगीका लागि साक्षात् भगवान् भेटिएजस्तै भयो । बाबाको अमृत बचन श्रवण गरेपछि मलाई पनि भौतिक वस्तुहरुको आकर्षण घट्न थालेको अनुभूति भयो । अलौकिक संसारमा विचरण गर्न पाइरहेका बेला म लौकिक घर बिर्सिसकेको थिएँ । मानौँ, म बाबामा समाहित भैरहेको थिएँ । बाबाबाट प्रभावित भएर मैले आफूलाई अज्ञानी बालक महसुस गरिरहेकोे थिएँ । मेरो एकाग्रता र तीव्र झुकावले बाबा प्रसन्न भए ।
उनले भने– ‘बालक आज तँलाई मसँगै लैजान चाहन्छु । हेर् बालक, यो दुःखको संसारबाट आज तँलाई अध्यात्मको दुनियाँमा प्रवेश गराउँछु । तयार बन् बालक । हे अज्ञानी, हे पापी, हे असुर, म तँभित्रको राक्षसी भूतलाई हटाएर दिव्य ज्ञान भर्न चाहन्छु । यो सांसारिक मायामोहको संसारबाट मुक्त हुन तयार बन् बालक ।’
बाबाको कुरा मैले बुझ्न सकिनँ । मलाई बाबाले कहाँ लिएर जान चाहेका हुन्, मैले केही मेसो पाउन सकिनँ । बाबाले मलाई असुर (राक्षस) भने पनि मलाई कत्ति पनि चित्त दुखेको छैन । अज्ञानी भने पनि, पापीकै संज्ञा दिए पनि उनको ओजका सामु मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नै सकिनँ । उनै बाबाको दिव्य अमृत बचनले मलाई स्पर्श गरिरह्यो । बाबाले मेरो आत्मपरीक्षा गर्न चाहेपछि मैले भनेँ– ‘म सांसारिक मायामोहलाई बाबामा समर्पित गर्न चाहन्छु । मलाई ज्ञान भरिदिनोस् ।’
बाबाले मेरो परीक्षा लिइरहे । मैले त्यसको उत्तर दिइरहेँ । बाबाले एक पटक फेरि सोधे– जीवन के हो बालक ? मैले उत्तर दिएँ– ‘पापैपापको भारी, दुःखैदुःखको पहाड र आशैआशको थुप्रो हो बाबा ।’
‘स्याबास बालक । तँ मैले खोजेको जस्तै चतुर बालक रहेछस् । तँ मैले देखाएको सत्मार्गको यात्रामा हिँड्न सक्छस् । तँ तपस्वी बन्न सक्छस् । एक दिन मेरो ज्ञानसाधनाबारे तैँले पनि बुझ्न सक्छस् । तँ असुर होइनस् बालक, तँ मेरो शिष्य हुन लायक छस् । चेलो हुने योग्यता छ तँसँग…।’ बाबाले मलाई विश्वास गरेर भने ।
‘तँलाई जीवनमा के–केसँग डर लाग्छ बालक ?’
मैले भनेँ, ‘अघिसम्म मलाई बाघभालु र सर्पसँग डर लाग्थ्यो बाबा । अब बाबाको साथमा रहेपछि मलाई मृत्युदेखि पनि डर छैन ।’ बाबा कुटीमा प्रवेश गरे । कुटीबाट फर्किएर अलिकति पञ्चामृत दिए । र, सोधे–
‘प्यास मेटियो बालक ?’
‘मलाई प्यासै छैन, बाबा ।’
‘यहाँ केही खानेकुरा छैन, म तँलाई के खुवाएर भोक मेटाऊँ ?’
‘मलाई न भोक छ, न कुनै तिर्खा बाबा । म भोको छु त केवल ज्ञानको । प्यासी छु त केवल ज्ञानको । बाबाको अमृत वाणीबाट म तृप्त भइरहेको छु । मलाई कुनै भोक, लोभ र मोह बाँकी छैन ।’
‘रात पर्न थाल्यो, तँलाई ढिला भयो कि ?’
‘मलाई कहीँ जानुछैन । हतार केहीमा छैन । बाबासँग रहेपछि मलाई केहीको अभीप्सा पनि छैन ।’
बाबाले शिवधुनी जगाए । शिवबुटी आगोमा चढाए । र, एक चिलिम शिवबुटी बनाए । आँखा चिम्लिएर ताने । केहीबेर धूवाँ बाबाको वायुमण्डलमा विलीन भयो । अर्को पटक पनि त्यही क्रम दोहो¥याए । र, जोडले मेरो मुखैमा पर्ने गरी फुकिदिए । मलाई कुहिरोले ढाकेजस्तो भयो । त्यसको प्रभावले म पनि लठ्ठ बनेजस्तो भएँ । आँखा राताराता बनाएर बाबाले जोडले चिच्याए ः
‘जय शिव शम्भो भोलानाथ, बमबम भोलेबाबा…।’
‘प्रसाद खाने बालक ?’
मैले, मुन्टो हल्लाएँ । बाबाले चिलिम पास गरे । मैले बाबाकै शैलीमा तानिदिएँ । त्यसपछि बाबा आफैँले ताने ।
‘भो, पुग्यो बालक । बालकले यसभन्दा ज्यादा पचाउन सक्दैन । अब हिँड् मसँग, शिवजीलाई भेट्न जाऊँ ।’
म बाबाको पछिपछि लागेँ । जङ्गलैजङ्गल, काँडैकाडाको असजिलो बाटो । बाटैभरि बाघभालुको बथान, खुट्टैभरि असंख्य जेलिन आएका सर्पहरु । बाबाले छिटोछिटो हिँडाए । म लुरूलुरू पछिपछि लागिरहेँ । बाबाले केही पनि बोलेनन् । मैले केही पनि सोध्न सकिनँ । यस्तैमा एउटा सर्प मेरो घाँटीमै बेरिन आइपुग्यो । र, टाउकोले ठुँगूँलाजस्तो गरेर मेरो आँखैअगाडि आएर जिब्रो निकाल्यो । मैले कत्ति पनि प्रतिक्रिया जनाइनँ । बाघले पनि मलाई निलूँलाजस्तो गरेर मेरो टाउकै अघि मुख बायो, म कत्ति डग्मगाइनँ । जङ्गलको बाटोमा हिँड्दा मेरा खुट्टा चरचरी चिरिएका थिए । हातखुट्टामा काँडाले नराम्ररी चिथोरेको थियो । धाराप्रवाह रगत बगिरहेका थिए । तर, मलाई दुखेन । मैले पीडाको अनुभूति पनि गरिनँ । कोशौँ हिँडेपछि एउटा ठूलो समुद्र आइपुग्यो । यति विशाल समुद्र त मैले सपनामा पनि देखेको थिइनँ ।
बाबाले टक्क अडिएर भने– ‘लौ बालक, मलाई त पौडी खेल्न आउँदैन । तिमीले मलाई तार्नुपर्छ ।’
धर्मसंकट ! खासमा मलाई पनि कहिल्यै पौडी खेल्न आएन । स्वीमिङ पुलमा पनि पाँच फिटभन्दा उचाइमा कहिल्यै जाने हिम्मत गरिनँ । पौडी खेल्न नजान्दा म कयर खोला, फसेरा खोला, बूढी रापती र भोकाहा खोलामा कयौँ पटक डुबेको थिएँ । एक दिन राफ्टिङ चढ्ने क्रममा त्रिशूली नदीमा डुब्दा गोताखोर नै आत्तिएको थियो । र, भनेको थियो–
‘यसरी डुबेर बाँचेको यो मान्छे नै पहिलो हो ।’
यस्ता विभिन्न घटनाहरुले गर्दा मलाई साँच्चै ‘वाटर फोबिया’ भएको थियो । पवित्र गंगामा स्नान गर्दा म किनाराको सहायता लिन्थेँ । अब मलाई फसाद आइप¥यो । मलाई पौडिन आउँदैन भनूँ भने बाबाले के भन्लान् ? आउँछ भनूँ भने पहिल्यै मेरो सातो गैहाल्यो । तैपनि, म कत्ति विचलित भइनँ । र, हिम्मतसाथ भनेँ–
‘आउनोस् बाबा म तारिदिन्छु ।’
बाबा प्रसन्न भए । र, एउटा वायुयानमा राखेर मलाई शिवजीको दर्शन गराउन लगे स्वर्गतिर…।
म अचम्ममा परेँ । सामान्य बाबा ठानेको त यिनी बडो शक्तिशाली बाबा पो रहेछन् । त्यसपछि स्वर्गलोकमा पु¥याएपछि मलाई एउटा ढोकेले सोध्यो–
‘तँलाई कसले लिएर आयो मत्स्यलोकबाट स्वर्गमा ?’
‘बाबाजीले’ मैले नम्र भएर जवाफ दिएँ ।
‘को बाबाजी ? कहाँको बाबाजी ?’ उसले मलाई केरकार ग¥यो ।
‘बाबा शिवभक्त स्वामी शंकराचार्य’– मैले उत्तर दिएँ ।
‘कसरी आइस् यहाँसम्म ?’
‘वायुयानमा चढेर आएको’– मैले उत्तर दिएँ ।
‘वायुयान…? हा..हा..हा….।’ अट्टहासपूर्ण हाँसो हाँस्दै सोध्यो– ‘ढाँटछस् ?’
‘ढाँटेको होइन महोदय, म शिवबाबाको दर्शन गर्न आएको हुँ । धरोधर्म मैले ढाँटेको छैन, शिवबुटी कसम’– मैले कसमसमेत खाइदिएँ ।
‘शिवबुटी खाएको के प्रमाण छ ?’ उसले फेरि सोध्योे ।
‘छ हजुर, बाबालाई सोधे पनि थाहा हुन्छ ।’
‘खै तेरो बाबाजी कहाँ छ ?’
‘भर्खरै मसँग आउनुभएको थियो, भित्र जानुभएको छ’– मैले उत्तर दिएँ ।
‘मोबाइल नम्बर छ तेरो बाबाको ?’ उसले फेरि पनि सोध्यो ।
‘मैले मागिनँ हजुर । बाबासँगै भएपछि मलाई केको डर भनेर मैले नम्बर माग्ने हिम्मत नै गरिनँ’– मैले जवाफ दिएँ ।
‘त्यसो भए, एक स्ट्रिक शिवबुटी ले न त । म पनि खाइहालूँ !’ उसले माग्यो । मसँग थिएन । भनेँ– ‘छैन हजुर, बाबासँग हुनसक्छ । मलाई बाबासँग भेट गराइदिनुस् । बाबाले दिनुहुन्छ ।’
‘बाबा अघि नै गइसक्यो, तँमात्र एक्लै छस् यहाँ ।’ उसले भन्यो ।
‘उसो भए शिवजीसँग साक्षात्कार गराइदिनुहोस्, म पनि फर्किन्छु’– मैले अनुनय–विनय गरेँ । उसले मलाई ‘अब्जरभेसन’ मा राख्यो ।
बाबाले मोक्ष प्राप्त गरे, अर्थात् बाबाले यो मत्स्यलोकबाट स्वर्गेलोक प्रस्थान गरेर अलप भए । म भने शिवजी भेट्ने अभीप्साका साथ हरेक वर्ष शिवरात्रि मनाउँछु । ओम् शान्ति, अर्थात् ब्रह्मकुमारी राजयोगले भन्छ–
‘शिवबाबा एउटा ज्योति स्वरुपमा हुनुहुन्छ । उहाँको कुनै रुप छैन, कुनै लिङ्ग छैन र कुनै जात छैन । निराकार हुनुहुन्छ ।’
अरु भोगीहरु भन्छन्–
‘शिवजी हुनुहुन्छ । विष, भाङ, धतुरो खानुहुन्छ, बाघमा चढ्नुहुन्छ । सर्पको माला घाँटीमा बेर्नुहुन्छ । ताण्डव नृत्य देखाउनुहुन्छ । कहिले बौलाउनुहुन्छ । रुप फेरिफेरि चमत्कार गर्नुहुन्छ । अर्थात्, शिवभक्त हुनका लागि विष, भाङ, धतुरो खानैपर्छ । त्यो बुटी खाएपछि साक्षात् शिवजीको दर्शन गर्न पाइन्छ । यो दुःखको संसारबाट मुक्त भइन्छ ।’
हरेक वर्ष शिवरात्रि मनाइएकै हुन्छ । धुनी बालिएकै हुन्छ । लड्डु, हलुवा र भाङ मिसाएको लस्सी खाइएकै हुन्छ । खोइ त, शिवजी यस्तै आकारको हुनुहुन्छ भनेर कसैले भन्न सकेनन् ! शिवजीका बारेमा अनेक भ्रम फैलाएर शिवजीलाई एउटा नशालु पदार्थ मन पराउने देवताका रुपमा स्मरण गरिने यो कस्तो पर्व हो शिवरात्रि ? मैले अझै बुझ्न सकेको छैन ।
शिवबुटी खाएर शिवजीको दर्शन गर्न सकिने भए, धुनी बालेर शिवजीसँग साक्षात्कार भइने भए, यो दुनियाँमा शिवलोक, अर्थात् स्वर्गमा पनि शान्ति मिल्ने थिएन । शिवको नाम बेचेर प्रसादका नाममा लागूपदार्थ सेवन गरेर कहिल्यै शिवजीलाई भेट्न सकिन्न । सकिने भए सबैभन्दा पहिले मैले नै शिवजीको दर्शन गरिसकेको हुन्थेँ होला । शिवरात्रिमा रमाइलो गर्नुछ भने, विष, भाङ, धतुरो खानु पर्दैन । गाँजा चढाउनु पर्दैन । भजन–कीर्तन, नाचगान गरेर पनि शिवरात्रि मनाउन सकिन्छ । नभएको दाउरा बालेर शिवजी खुसी हुने होइनन् । शिवजीको सम्झनामा घैँटो फुटाएर पनि रमाइलो गर्न सकिन्छ । शिवको बहानामा गाँजा–चरेस खाएर, खुवाएर केही फाइदा छैन । दुव्र्यसनी बढे भनेर चिन्ता मान्ने हाम्रो समाजमा गाँजा तानेर शिवभक्त हुने अनौठो संस्कार देखेर म दंग पर्छु । अनि सम्झन्छु, केही वर्षअघि शिवजी भेटेको घटना ।
अस्ति भर्खरकै कुरा हो । एक जना भद्रसँग अर्को भलाद्मी फोनमा सम्वाद गर्दैथिए । संवादको सारसंक्षेप यस्तो थियो–
‘के छ पुन्टे, यसपालि शिवरात्रिको तयारी कस्तो छ ?’
‘केही छैन जिरे । शिवबुटी नै पाइँदैन । अँ सुन न, तँ आउँदा त्यतैबाट आठ–दस ‘स्टिक ज्वाइन’ लिएर आइज न ल ?’
‘यहाँ नि लास्ट टाइट छ के । ‘खरेल’ कप्सले सबैको सातो लग्द्याछ यार ।’
‘उसो भए कसरी म्यानेज गर्ने भन न, यहाँ पनि ‘कार्की’ले लास्ट ह्याङ हानिराछ के ।’
‘अनि त्यो माइकल हड्डीले जङ्सन देख्या होला नि ? नभए टाइगरसँग भन न । यसो दुई–चार स्टिक नभए, के शिवरात्रि सेलिब्रेट गर्नेे । रड्डी हुने भो नि पुन्टे ?’
‘ल म बुझ्छु, त्यो हब्सीसँग छ कि ? तँ पनि ट्राइ गरिराख् न है । त्यताको हिमाली ज्वाइन चिप्पड हुन्छ । लङ ट्रिप दिन्छ यार….।’
..यस्ता संवाद सुनेपछि म शिवजीको दर्शन गर्न गएको र दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेको दिनको झल्झली सम्झना आउँछ ।
ढोकेले मलाई धेरै बेरसम्म केरकार गरिरह्यो । म भने बाबाको दुहाई दिँदै बसिरहेँ । उसले मलाई तँ पहिले बाबाको मामाघर हिँड् अनि शिवजीकहाँ जान पाउँछस् भन्यो । त्यसपछि म उसको पछि लागेर गएँ । ढोका खोलेपछि त म झसङ्गै भएँ । नर्कलोक पो परेछ ।
–कसलाई भेट्न जान लागेको ?
–घर कहाँ हो ?
–कोसँग आइस् ?
उसले बाबासँग भेट्टाइदियो । बाबा धुम्म परेर बसेका रहेछन् । उनले मेरो अनुहारमा गडेर हेरे । अनि भने–
‘बालक यो मत्स्यलोक हो । यहाँ यस्तै असुरहरु बस्छन् । यिनलाई सद्बुद्धिको खाँचो छ । यस पटक तैँले शिवजीलाई भेट गर्न पाइनस् । बाबालाई दुःख लागेको छ । केही छैन बालक, कत्ति चिन्ता नमान् ।’
म बाबासँगै प्रहरी कार्यालयमा थिएँ । ज्वाइनको भाषामा ‘मामाघर’ भनेको प्रहरी कार्यालय पो रहेछ । त्यसपछि शिवरात्रि मनाउन कहिल्यै शिवबुटी खाइएन । र, शिवबुटी खाएर शिवजीसँग भेटन सकिँदो रहेनछ भन्ने ज्ञान पनि मिल्यो । आखिर म दिव्य ज्ञानको खोजीमै त भौँतारिरहेको थिएँ नि, कि कसो ?